Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » South African Airways na -alaghachi n'igwe na Septemba 23
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
South African Airways ga -arụ ọrụ ụgbọ elu site na Johannesburg ruo Cape Town, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka na Maputo.
South African Airways ga -amalite ọrụ na Septemba 2021.
SAA ga-abụ onye na-ebu nchekwa ma na-agbaso ụkpụrụ COVID-19.
SAA na -amalitegharị na nnukwu azụmaahịa dị egwu.
Nchere ahụ agwụla. Naanị ihe na -erughị otu ọnwa, a ga -ahụ ọmarịcha ụgbọ mmiri South Africa Airways (SAA) na mbara igwe ka ụgbọ elu ahụ na -amaliteghachi ọrụ. Onye na -ebu ụgbọelu ekwenyela na ụgbọ elu ndị mbụ ga -amalite na Tọzdee, Septemba 23, 2021. Tiketi ga -aga ahịa na Tọzdee, 26 Ọgọst 2021. Akwụkwọ ndetu Voyager na mgbapụta Ebe E Si Nweta Ego Ego ga -adị site na Mọnde, 6 Septemba 2021.
Onye isi oche South African Airways Thomas Kgokol
Onye isi ụlọ ọrụ nwa oge Thomas Kgokolo na -ekwu, "Mgbe anyị jisịrị ọrụ ike ruo ọtụtụ ọnwa, anyị nwere obi ụtọ na SAA na -amaliteghachi ọrụ, anyị na -atụkwa anya ịnabata n'ụgbọ njem anyị na -eguzosi ike n'ihe na ife ọkọlọtọ South Africa. Anyị na-aga n'ihu ịbụ ndị na-ebu nchekwa ma na-agbaso usoro iwu COVID-19. "
South African Airways ga -arụ ọrụ dị ka usoro izizi site na Johannesburg gaa Cape Town, Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka na Maputo. A ga -atụkwasị ọtụtụ ebe na netwọk ụzọ ka ọ na -akwalite ọrụ na nzaghachi maka ọnọdụ ahịa.
Kgokolo gbakwụnyere, "enwere nnukwu ịnụ ọkụ n'obi n'etiti Team SAA ka anyị na -akwado maka ịpụ, na -enwe otu ebumnuche -iji wughachi ma kwado ụgbọ elu bara uru nke na -amalitekwa ọrụ iduzi n'etiti ndị ụgbọ elu mpaghara, kọntinent na mba ụwa."
Kgokolo kwuru, “ngalaba ụgbọ elu na -aga ugbu a oge ule, anyị makwaara ihe ịma aka siri ike na -abịa n'ihu n'izu ndị na -abịa. Anyị na -ekele South Africa maka nkwado anyị nwetara n'ịga anyị ebe anyị nọ taa. Dịka anyị dị njikere ugbu a maka ịpụ, anyị na -ahụ nke a dị ka nnukwu ihe dị mkpa maka SAA na
Dabere na onye isi oche nke Board SAA, John Lamola, kemgbe onye na -ebu ụgbọ ala si na nzọpụta azụmaahịa na njedebe nke Eprel 2021, Ngalaba nke ụlọ ọrụ ọha na Board na ndị otu njikwa ejidela atụmatụ maka ịmaliteghachi. a hazigharịrị ma dabara maka ebumnuche
ụgbọ elu nke ndị South Africa nwere ike ịnya isi ọzọ. Lamola kwuru, "ụgbọ elu ahụ na -amalitegharị na nnukwu azụmahịa azụmaahịa".
Cuthbert Ncube, onye isi oche Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB), kwuru mgbe ọ natara akụkọ ahụ, na Ndị njem nlegharị anya nke Africa na -enwe obi ụtọ ịhụ ka South African Airways malitegharịrị ọrụ ya wee laghachi n'igwe. Nlaghachi nke onye isi mpaghara na mba ụwa dịka South African Airways ịzụ ahịa dị mkpa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem na mpaghara ndịda Afrịka ịmalitegharị wee malite mgbake site na mbibi niile ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ mebiri.